Waxbarashada – Hanoolaato Somalia National Party
Waa yaryihiin aduunka wax kamuhiimsan waxbarashada. Hanoolato waxay rabtaa shacabkeena Soomaaliyeed in ay kuligood helaan waxbarashada aduunka ugu sareysa. Waxaan kabilaabaynaa in aan marka hore waxbarashada oo dhan lacag la’aan kadhigno ilaa heer jaamacad. Si aan taas ugaarno waa in baajedka dowlada ilaa 30% uqoondeyno ilaa inta ay heerka waxbarasha dadkeena heer sare kagaarayso. Sanadaha ugu horeya waliba maadaama dowladu ay skoolo, koleejooyin iyo jaamacado badan dhisi doonto, waxaa laga yaabaa in bajedka dowlada oo dhan iyo kabadan (deyn) ay waxbarashada gasho. Hadii aan rabno in aan si toos ah uga baxno wareegaan faqriga, gaajo, fowdo iyo isqabqabsiga ah waa in aan waxbarashada awoodeena oo dhan iskugu geynaa.
Hanoolaato waxay rabtaa wax barasho dalkoo dhan gaarsiisan oo tuulo ilaa magaalada ugu weyn dalkeena ay isku si uhelaan. Waxaan rabnaa manhaj waxbarasho oo midaysan dalkoo dhan oo ay dowlada dhexe oo lakaashanaysa aqoonyahan iyo macalamiin ay soo diyaariso. Waxaan rabnaa dalkeenu in uu yeesho waxbarasho bilaash ah oo qof kasta uu xaq uleeyahay in uu kahelo meeshu dagan yahay oo gaarsiisan ilaa iyo markay ugu yaraato sekandari. Waxan kaloo rabnaa waxbarasho heer farsamo iyo koleej ah oo aan sidaas ugaga fogeyn in uu muwaadin kasta heli karo. Waxaan kaloo rabnaa waxbarasho heer jaamacadeed oo ayaduna bilaash ah in ay gobolkiiba ugu yaraan hal muwaadin kasta uu kaheli karo.
Hanoolaato way ogolaan doontaa waxbarasho lacag ah oo private ah hadii shirkadaha ama dadka bixin doona adeegaas ay kow diwaan gashan yihiin labo ay sharuudaha dowlada dhexe soo saarto waafaqsan yihiin sida matalan waxaan rabnaa in heerka waxbarashadooda ay dowladu ka kontoroosho. Waxaa kaloo laga rabaa in aysan wax lid ku ah qarannimada Soomaaliyeed ama caafimaadka ardayga waxba udhimaynin. Waxaa kale oo aan rabnaa in ay qasab noqoto maadooyinka ay dowladu waajibto ay dhigaan oo laga dhigo fasalada loogu talagalay. Matalan waa in ardahy kastaa uu bartaa luuqada Soomaaliga ah, taariikhada Soomaalida iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. Waa sidaas oo kale ardayga la baraa akhlaaqda wanaagsan si waafaqsan diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban iyo muwaadinnimada ay jiritaanka qarankeenu u baahan yahay. Waxaas oo dhan waxaa soo diyaarin doona aqoon yahan iyo culimadeena Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa ardaygu markuu waxbarashadiisa/teeda dhameysto uu aqoon lahaado uu xaquuqdiisa yaqaan, xaquuqda muwaadiniinta kale yaqaan, kushaqeysan karo muwaadiniinta kalena oo dalka lawadaaga si nabad iyo ixtiraam lehna kula dhaqmi karo.
Aqoontu Waa Hanti
Umad aqoon lihi marwalbaba way kafiican tahay mid jaahil ah. Aqoontu waxay keenaysaa in qofku wax soosaar yeesho ama wax soosaarkiisa kor uqaado. Waxay keenaysaa in qofku uu dhaqaalaha barto oo aysan khasaaro badan ku imaan. Waxay keenaysaa in qofku uu khaladaad badan oo jahligu keeno uu kabadbaado. Waxay keenaysaa in qofku uu sharciga dalka uhogaan sanaado taas oo ayadana keenaysa in dowladu iyo muwaadiniinta kale aysan khasaaro maal iyo mid wakhtiba ku imaan amaba kayaaro. Waxay keenaysaa in qofku caafimaadkiisa uu fiicnaado oo uu yaqaano wixii dhib caafimaad ukeeni kara sidaasna iskga ilaaliyo. Waxay kaloo keenaysaa in ay jiilka cusub iyo kuwa soo socda ay aqoontaas kadhaxlaan iyo waliba faaiidooyinkii ay kuwii ayaga kahoreeyay kaheleen oo dhan.
Aqoonta faaidooyin keeda inta laguma soo koobi karo ee anagoo dhan guul Insha Allah.
… Halkaan Riix …
Noqo Qofka Ugu Horeeya
oo aan Ogeysiino